Nailiky ny FJKM ry Ratovohery Eddy (Zoky Eddy)
2008-08-03 @ 21:57 in Finoana
Tsy tany amin'ny FJKM aho androany no namonjy fotoam-pivavahana fa tany amin'ny FLM Ambatovinaky. Miala sasatra moa ny Sekoly Alahady misy ahy ka dia naleoko niakatra tany an-tanàna ambony indray (intelo alahady androany).Noho izany tsy reko mivantana ny filazana tao amin'ny vaovaom-piangonana fa olona no nampita tamiko. Tsy nianona tamin'ny filazan'ny olona iray fa lasa nanontany olona hafa iray fiangonana mihitsy. Dia voamarina tokoa fa teny midina izy ity (avy aiza ary?) ary nolazaina fa "tsy miara-miasa amin'ny FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara) intsony Ratovohery Eddy sy ireo mpiara-miasa aminy (iza no tena tompon'ny fanapahan-kevitra?). Hevitreverina fa naely nanerana ny sahan'ny FJKM ity filazana ity ka ny eto an-drenivohitra aloha no mahalala azy androany.
Loharanom-baovao hafa ihany koa no nandrenesana fa na Ratovohery Eddy aza dia mahalala tsara fa tsy mahazo mampianatra (manao seminera) any amin'ny FJKM intsony izy ka ny FLM (Fiangonana Loterana Malagasy) no miara-miasa aminy amin'izao fotoana izao (ankasitrahako ny FLM izany).Koa amin'izao ankatoky ny zaikabe sy ny fankalazana ny ivon'ny fankalazana ny faha-40 taona ny FJKM hotanterahina any Mahajanga izao dia te-hahalala aho hoe inona no anton'izao teny midina izao? Nisy fahotana mahafaty nataony ve? Nanevateva ny FJKM ve izy sa nandika ny lalàna fiorenan'ny FJKM? Sa tsy mifanaraka amin'ny foto-pinoan'ny FJKM ny zavatra ampianariny? Miandry fanazavana avy amin'ny Foibe na izay niandohan'ny teny midina aho. Naninona no tsy niandrasana Sinaoda Lehibe ny fanapahan-kevitra... Sa ity no karazana antso manao hoe Mivoaha! Mivoaha ao Babilaona ianareo oloko, fa Rava Babilaona lehibe?
Raha misy ny fitenenana hoe tsy miara-miasa dia karazany fandroahana ankolaka ihany izany. Ny fiangonana manko araka ny fihevitro misy ilay teny hoe tsinjaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny Fanahy dia iray ihany, tsy voatery ho maso avokoa ny momba ny tena, ary ny maso tsy mahazo miteny amin'ny tanana hoe satria tsy maso ianao dia tsy ekena ho momba ny tena (fiangonana). Koa raha misy singa amin'ny tena esorina dia tokony ho araka ny filazan'i Jesoa manao hoe raha ny tananao no mahavery anao, esory any fa aleo ianao voavonjy tapatanana toy izay very manontolo miaraka tamin'ilay nampanota anao. Fanomezam-pahasoavana ho azy ny mampianatra koa raha tsy mahazo mampianatra intsony izy dia tsy avela manao ny asam-pahasoavana nomena azy...midika ho fanalana azy ihany fa tsy inona tsy akory.
Tranga efa niainako manko ny nandrarana ahy tsy hahazo mampianatra sekoly alahady intsony tany amin'izay FJKM (tsy ilay ampianarako sekoly alahady amin'izao fotoana kosa aloha) iray izay. Tsy hoe nahabevohoka zanak'olona aho na nanodikodina zaza tsy ampy taona fa nianatra saikolojia tany amin'ny fiangonana tsy miankina iray izay (ny fiangonan-dRakotomalala Romain) no nisy nahita sady izaho koa tsy niafina ka ahiana mety hanao fampianaran-diso. Mazava loatra fa tsy manana na inona na inona mamatotra ahy aho ka raha izay kely tiako zaraina no andrarana ahy, misintaka soa aman-tsara aho mazava loatra.
Tsara ihany angamba ny mampahafantatra izay tsy mahalala hoe iza moa Ratovohery Eddy. Tsy afaka ny hihambo ho mahalala azy aho fa izay fantatry ny maro nanana fifaneraserana lavitra azy ihany no fantatro. Voalohany, tsy mpitondra fivavahana izy fa kirisitiana tsotra, izany hoe lahika. Tao amin'ny Fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly deparitemantan'ny fanolorantsaina ho an'ny mpivady no azo lazaina fa nipoiran'ny Mission Pour Le Salut et le Service de la Famille na Fikambanana Vonjeo ny Fianakaviana izay naoriny. Manana ny teny faneva manao hoe "Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana"izy ary dia io fandaharana Vonjeo ny Fianakaviana io no tena ahafantarana azy. Teny Firantsay ny famelabelarana nataony tamin'ny voalohany (noho izy nampianarina tamin'ny sekoly Firantsay fahatanora) fa taty aoriana vao naompany ho amin'ny teny Malagasy hahatratra ny sarambambem-bahoaka indrindra fa ny tanora.
Sahiko ijoroana ihany koa fa efa nanaraka ny seminerany aho indroa (sa intelo akory aza) izay. Ny voalohany tao amin'ny Radio sioka Vao izay tsy hita nanjavonana ankehitriny ary nifampitohy avy hatrany tamin'ny fanarahana mivantana ny seminera notontosaina tao amin'ny tranompokonolona Analakely (andiany faha-30) ary ny fahatelo dia vao tamin'ny herintaona tao amin'ny FJKM Ambatonakanga. Anisan'ny nampijoro ahy ho tsy ho voahozongozona tamin'ny finoana ny seminerany, ka nahafahako nijoro tamin'ny maridrefin'ny baiboly fa tsy izay lazain'ny olona sy ny ataony mifandaka tanteraka amin'ny torolalan'i Kirisity aza.
Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra.